Adobe သည်သင်ကိုယ်တိုင် selfie တိုးတက်စေရန် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုလိုသည် Androidsis
စမတ်ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီအိတ်ကပ်ထဲ၌ကောင်းသောကင်မရာတစ်လုံးဖြင့်ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာသည်။ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါတို့ကအပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာတွေဖြစ်လာတယ် တကယအသစ်သောဘာမျှမဟုတ်ပေမယ့်ဖြစ်လာသည် နှေးနှေးခြင်းမရှိနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြသတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းရှိကင်မရာသည်မည်မျှပင်ကောင်းမွန်သည်၊ မည်သည့် megapixels များပါ ၀ င်ပါစေ၊ သင့်ကိုယ်သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောပုံတူကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော် Adobe သည်ဤပြproblemနာကိုအဆုံးသတ်လိုသည်။ ၎င်း၏သုတေသနအဖွဲ့သည် Adobe Sensei မှအင်အားကြီးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ selfies တိုးတက်စေရန်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်သင်ကြားခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်း.
YouTube တွင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်၊ Adobe သည်၎င်းရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကသည် သာမာန် selfie ရိုက်နိုင်သည့်ဓာတ်ပုံကိုအကွာအဝေးမှဝေးကွာသောပုံနှင့်တူအောင်ပြုပြင်နိုင်သည့် app တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။။ ထို့ကြောင့် application တွင်ထည့်သွင်းထားသောနည်းပညာနှင့်ကိရိယာများသည် selfie ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီး frame ထဲ၌အလွန်အကျွံထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကောက်ခြင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအခြားသူတစ် ဦး ကရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံနှင့်တူသည်။ တောင်မှ အချို့သောအတိမ်အနက်နှင့်အတူ 2D ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် (3D)
ဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအထူးသက်ရောက်မှုများနောက်တစ်ခုမှာ ပုံတူ၏အလိုအလျှောက်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသင်၏လက်ချောင်းဖြင့်ထိရုံဖြင့် application သည် selfie ၏နောက်ခံကိုဖယ်ရှားသည်။ ထို့နောက်နောက်ခံကိုနေရာချထားနိုင်သော်လည်းပိုမိုသာလွန်သောအတိမ်အနက်နှင့်ပုံရိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ပုံသည်သမားရိုးကျကင်မရာဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Adobe မှထုတ်ဝေသောသရုပ်ပြဗီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ selfie နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တုပလိုသည့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမည်သို့ရှာဖွေနိုင်ကြောင်းကိုလည်းပြသသည် ထိုအခြားဓာတ်ပုံမှစစ်ထုတ်သည့်အရာများနှင့်အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်စက်စက်သို့အလိုအလျောက်သုံးပါ.
Abode သည်၎င်းဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့် application ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းကိုမည်သည့်အချိန်၌စတင်မည်ကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်မကြာမီအနာဂတ်တွင်ကုမ္ပဏီကအလားတူအရာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Adobe သည်သင်ကိုယ်တိုင် selfie တိုးတက်စေရန် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုလိုသည်
Ulefone Power2သည် Huawei P10 အတွက်ချွေတာနိုင်သောအရာဖြစ်သည်